Ajụjụ a nwere mmasị n’ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-amụ asụsụ mba ọzọ.
Mgbe mmepe nke ọma nke nsụgharị mbụ nke mobile LingoCard na-etinye ntinye ya na ọha na eze mfe inweta, ngwa ahụ nwere ọtụtụ iri puku ndị ọrụ.
Ma olee maka omume asụsụ? Anyị chere – gịnị kpatara na anyị agaghị eme ka ndị a niile nwee ike ịkọrọ ha asụsụ ha ma nyere ibe ha aka.
N’ihi nke a, anyị nwere echiche nke ịmepụta usoro mmụta mmụta mba nile nke ga-edozi nsogbu nke omume maka ndị na-amụ asụsụ mba ọzọ site n’inyere ha aka ịchọta ndị nkụzi kwesịrị ekwesị.
Ikekwe okwu kachasị mma nke nkwurịta okwu ụwa bụ Bekee. Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ihe karịrị pasent 80 nke ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ nke asụsụ mba ọzọ (ihe dị ka ijeri 1.5) na-amụ Bekee na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla chọọ ịme asụsụ.
Ebee ka anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị ọkà okwu Bekee.
Kedu ihe ndị ọkà okwu dị ala ga-ekwurịta okwu?
Mbụ, ohere iji nweta ego na weebụ. Ọtụtụ nde ndị mmadụ gburugburu ụwa dị njikere itinye ego online site n’ikwu okwu n’asụsụ nke ha.
Nke abuo, ọtụtụ ndị na-asụ Bekee n’asụsụ Bekee na-amụkwa asụsụ mba ọzọ, ha na-achọkwa ịmụ asụsụ n’asụsụ mba ọzọ ha na-amụ. Ọtụtụ n’ime ha chọrọ ịmụta asụsụ ị na-asụ. Ya mere, ị nwere ike inyere ibe gị aka ịmụta, site na ime ihe ndị dị ka itinye 30 nkeji na-asụ n’asụsụ gị iji gbanwere 30 nke nkwurịta okwu n’asụsụ ị na-amụ.
Nke ato, otutu ndi mmadu gburugburu uwa choro nkuzi onyonyo ma na acho ndi nkuzi na ndi ozo. Dịka ọmụmaatụ – na mgbakọ na mwepụ, egwu, nri nke efere mba, sayensị ziri ezi, nchịkọta akụkọ, mmemme, imewe, wdg. Onye ọbụla nwere nkà na nkà nke onwe ya. Gịnị ma ọ bụrụ na ị ga – enyere aka ịkụziri mmadụ asụsụ ha na – amụ, mgbe ị na – ezi ihe n’otu oge. Dịka ọmụmaatụ: Jessica bi na obere obodo Amerịka ma chọọ onye nkuzi mgbakọ na mwepụ, mana enweghị ego ya, ọ na-esiri ya ike ịchọta ezigbo onye nkụzi. N’ụzọ dị mma, maka Jessica, ị maara mgbakọ na mwepụ nke ọma ma na ịchọrọ ịchọta onye na-asụ Bekee, mana ị bi na Russia. Uzo anyi ga-ewebata gi na ibe gi ma si otú a ga-enwe ike imuta n’efu ka ị na-ekerita ihe omuma gi, obuna ma oburu na i bi na uzo nke uwa.
Ọzọkwa, iji ihe omume anyị n’oge mkparịta ụka ma ọ bụ videoconference, ị nwere ike ngwa ngwa ịmepụta kaadị asụsụ na okwu ọhụrụ na ahịrịokwu ndị ga-aga na nchekwa igwe ojii gị maka mwelite ma jiri ya na ngwaọrụ anyị niile.
Ya mere, nchịkwa mmụta mmụta mba ụwa nwere ike ịba ụba ọ bụla ịdọ aka ná ntị ma nwee ohere iji nyere ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa aka.
Ụzọ kachasị mma isi mụta asụsụ ahụ bụ iji jupụta na asụsụ asụsụ, ya mere, anyị na-ezube ịzụlite ngwá ọrụ maka ịchọta ụlọ na mba ọ bụla nwere ohere ikwurịta okwu na ndị nwere ike ịnweta ụlọ, yana ikike ịchọta klas na ụlọ akwụkwọ asụsụ na atụmatụ njem.
N’ileghachi anya na mbụ, echiche anyị nwere ike iyi ihe ezi uche na-adịghị na ọtụtụ ndị, ma site na mmezi ziri ezi na ịkọ akụkọ nye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ gburugburu ụwa, o doro anya na nke a ga-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere echiche dị mma banyere mmepe nke ikpo okwu anyị ma ọ bụ na ịchọrọ isonye na ọrụ anyị – dee anyị n’oge ọ bụla.